Umatshini weebhetri zeLithium Polymer, abaThengisi-abaThengisi beebhetri base China Lithium Polymer
Phucula i-Li-po ibhetri 35R-6000 6000mAh 3.8V ibhetri yesithethi seBluetooth, iithoyi, iRobhothi, iselfowuni, POS, i-Express Smart Mini Printa
Ukutshaja kwakhona i-PLM-35R-6000 3.8V 6000mAh ibhetri isebenzisa ezona zinto zibalulekileyo zinamandla aphezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri ye-Li-po 605264 2300mAh 3.7V ibhetri yesithethi seBluetooth, iithoyi, iRobhothi ye-elektroniki, iPOS
:: Ibhetri ye-PLM-605264 3.7V 2300mAh evuselelekayo isebenzisa eyona nto inomgangatho ophezulu onokubakho kubasebenzisi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Li-po Ibhetri A7 2100mAh 3.7V Iseli yeBhetri yeSithethi seBluetooth, iithoyi, iRobot ye-elektroniki, iMask efanelekileyo
Ukutshaja kwakhona i-PLM-A7 3.7V 2100mAh ibhetri isebenzisa ezona zinto zinamandla kunye nomthamo ophezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Li-po Ibhetri NP-FZ100 7.2V 2280mAh Ibhetri yeSeli yePOS, Ikhamera
Ibhetri ye-PLM-NP-FZ100 eyi-7.2V 2280mAh isebenzisa ezona zixhobo zibalaseleyo ezinomgangatho ophezulu kakhulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhethri elisuswayo le-Li-ion ibhetri ye-2500mAh ephathekayo ephathekayo ye-NFC itafile yePOS yeNtlawulo yokuhlawula isiphelo sePOS
Ibhetri ye-PLM-XK-6019 3.7V 2500mAh esetyenzisiweyo isebenzisa ezona zixhobo zibalaseleyo zinomgangatho ophezulu kubasebenzisi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
I-335074 3.7v 1550mah ibhetri ye-Li-po egcwalisekayo ye-thermometer
Ibhetri ye-PLM-335074 3.7V ye-1550mah enokuphinda isebenze yeyona nto ibalaseleyo inesikhundla esiphezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Amandla ombane aphezulu 7.4V 1800mAh LP-E6 ibhetri eqhubayo ye-li-po yokurekhoda kwamapolisa
Ukutshaja kwakhona i-PLM-LP-E6 7.4V 1800mAh ibhetri isebenzisa ezona zinto zibalulekileyo zinamandla aphezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Iindlela ezimbini ze-SC2F 7.4v 2000mAh Polymer Lithium Ibhetri egcwalisekayo yePakethi yeBattery yeNtetho yeRadiyo yeNtetho, iithoyi, iRobot ye-Elektroniki, isixhobo sokuNyanzeliswa komthetho
Ibhetri ye-PLM-SC2F 7.4V 2000mAh ephinda isebenze isebenzisa eyona nto inomgangatho ophezulu onokubakho kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Amandla ombane aphezulu 3.8V 1700mAh 803048-2P ibhetri ephinda i-li-po yokurekhoda unyanzeliso lwamapolisa
Ibhetri ye-PLM-803048-2P 3.8V ye-1700mah esebenzisekayo isebenzisa ezona zixhobo zibalaseleyo ezinomgangatho ophakamileyo kubathengi abasemgangathweni. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri ye-Li-po NP-BX1 3.7V 1400mAh Iseli sebhetri ye-POS, ikhamera
Ukutshaja kwakhona i-PLM-NP-BX1 3.7V 1400mAh ibhetri isebenzisa ezona zinto zibalulekileyo zinamandla aphezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri esuswe kwakhona ye-Li-ion 1600mAh ephathekayo ephathekayo ye-NFC ithebhulethi ye-PDA 2D yebhakhowudi yokuskena nge-Posos yebhasi
Ibhetri ye-PLM-T8601 3.7V 1600mA ephinda isebenze isebenzisa eyona nto inomgangatho ophezulu onokubakho kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri ye-Li-po V9 1800mAh 3.7V Iseli yebhetri yeSithethi seBluetooth, iithoyi, iRobhothi ye-elektroniki, isixhobo sokunyanzeliswa komthetho
Ukutshaja kwakhona i-PLM-V9 3.7V 1800mAh ibhetri isebenzisa ezona zinto zibalulekileyo zinamandla aphezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.